XOG CUSUB: Codadka uu heysto Musharax Farmaajo oo la ogaaday iyo Xildhibaanadii ugu badnaa oo… | Gaaloos.com
Home » News » XOG CUSUB: Codadka uu heysto Musharax Farmaajo oo la ogaaday iyo Xildhibaanadii ugu badnaa oo…
XOG CUSUB: Codadka uu heysto Musharax Farmaajo oo la ogaaday iyo Xildhibaanadii ugu badnaa oo…
Musharaxa Xilka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa si lama filaan ah ku kasbanaya taageerada qaar badan oo kamid ah xildhibaanada Soomaaliya.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay codkadhibanaha.com ayaa sheegaya in musharaxan oo soo noqday Raisul wasaaraha Soomaaliya uu kulamo gooni gooni ah la yeeshay ku dhawaad 123 (Labo boqol) oo kamid ah xildhibaanada labada aqal.
Xildhibaanadaas ayaa Farmaajo ubalan qaaday iney codkooda siin doonaan si uu hormuud ugu noqdo isbadalka cusub ee Soomaaliya.
Waa Kuwee Xildhibaanada uu la heshiiyay Farmaajo?
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in xildhibaanada ugu badan ee taageerada uu ka heli doono Farmaajo ay kasoo jeedaan Puntland, Jubbaland, Muqdisho iyo deegaanada Waqooyi.
Ilo wareedyo aan kasoo xiganay xubno katirsan gudiga olalaha doorashada ee Farmaajo ayaa sheegaya in Farmaajo uu xildhibaanada ubalan qaaday lacag waali ah si uu u adkeeyo xariirka uu xildhibaanadan la leeyahay.
Xogta ayaa intaas ku dareysa in xildhibaanadan oo intooda badan ay isku beel yihiin Farmaajo oo beesha Daarood kasoo jeeda ay ku adkeysanayaan in doorashada uu sanadkan kusoo baxo musharax beeshooda ah.
Sidoo kale Xildhibaanada Waqooyiga Soomaliya kasoo jeeda ayaa taageero balaaran siin doona Farmaajo waxaana ugu badan xildhibaanada kasoo jeeda deegaanada Khaatumo State
WAL WALKA Farmaajo
Musharax Farmaajo oo haysta taageerada ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed ayaa ka wal walsan in xildhibaanada uu la heshiiyay ay qayaano ku sameeyaan daqiiqada ugu danbeysa ee doorashada.
Arimaha uu ka wel welsan yahay waxaa kamid ah in xildhibaanadaas ay lakala saftaan labada musharax ee kala ah Sh Shariif iyo Xasan Sh Maxamuud.
Rabitaanka Shacabka Soomaaliyeed
Dad badan ayaa taageersan iney arkaan Farmaajo oo ah madaxweynaha Soomaaliya inkastoo la dhaliilo in qaabka uu haatan xilkaas uraadinayo aysan aheyn.
Farmaajo ayaa looga banaanbaxay inta badan gobollada dalka kadib marki laga qaaday xilkiisa ra’isul wasaaraha Soomaaliya, shacabka ayaana ku farxaya hadii uu madaxweyne noqdo.
Si kastaba, Shabakada Wararka ee Warqaad.com ayaa idiin soo gudbineysa dhacdo walba oo la xariira arimaha doorashada Soomaaliya iyo xogta olalaha musharaxiinta.
Title: XOG CUSUB: Codadka uu heysto Musharax Farmaajo oo la ogaaday iyo Xildhibaanadii ugu badnaa oo…